Teatra poetika arahina dihy: lalaovin’ny Bee Z’Art ny « Tononkira fananganana ny maty » | NewsMada
Teatra poetika arahina dihy: lalaovin’ny Bee Z’Art ny « Tononkira fananganana ny maty »
Anisan’ny nanaitra izay nahita azy ity sanganasan’i Avelo-Nidor ity. « Tononkira fananganana ny maty ». Fa iza sa inona ny maty ? Iza no afaka mamelona izany maty izany?
Ny manana aina, saika mandalo na mandia ny fahafatesana avokoa ! Ao koa ireo zavatra nisy sy misy ary hisy kanefa mety iharan’ny fahafatesana ihany koa. Ireo rehetra ireo, samy tafiditra ao anatin’ilay teatra poetika arahina dihy nampitondraina ny lohateny « Tononkira fananganana ny maty ». Ny 24 mey izao, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro, ny fikambanana Bee Z’Art indray no hilalao azy ity ao amin’ny Ivokolo Cemdlac Analakely.
Hoy i Avelo-Nidor raha nanontaniana ny hevitra tiana hampitaina amin’ity teatra poetika ity : « Amin’izao fotoana izao, efa tsy manana toe-tsaina hiombona intsony ny olona. Efa samy manao izay ho afany amin’ny fiainana hany ka lasa manaotao foana ny ankamaroany : misoloky, mamono olona, mametsifetsy ny hafa ary lasa tsy manam-panahy… Io ilay fanahy maha olona hoy isika Malagasy. Noho izany, ny maty atsangana eto dia ilay fanahy maha olona fa tsy vatana nofo sy ra akory… Atsangana amin’ny alalan’ny tononkalo… ».
Misy akta 4 ny « Tononkira fananganana ny maty ». Ny akta voalohany miresaka ny tontolon’ny soratra sy ny fiainam-pirenena. Ny akta faharoa sy ny fahatelo ary ny fahefatra miresaka momba ny fitiavana. Tononkalo 40 mahery no mandrafitra ny tantara raha 90 mahery kosa ny mandrafitra azy ireo ho boky.
Marihina fa ny fikambanana Bee Z’Art rahateo no mikarakara azy ity. Fikambanana niorina tany amin’ny taona 2016 ahitana sampana 3 : fanentanana sy dihy ary ny mozika izay mbola eo an-dalampikarakarana. « Bee Z’Art: Tantely mizara ny mamy indrindra. Ny « Z » tokana ary ny « Art » zava-kanto. « Bizarre » : miezaka hanao zavakanto miavaka, hafahafa, tsy toy ny mahazatra kanefa kanto… », hoy i Avelo-Nidor.